२०७७ असोज ११, आइतबार | eAdarsha.com
अपूरा कार्यलाई पहल गर्दा पूर्ण गर्न सकिनेछ । बन्धुवान्धवसँगको रमाइलो जमघट हुनेछ । धेरै क्षेत्रमा दक्षता हाँसिल गरिनेछ । विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न पाउँदा हर्षित भइनेछ । ऐतिहासिक कार्यको आरम्भ हुनेछ ।
मांगलिक कार्यको निम्तो पाइनेछ । भाग्यले साथ दिँदा थालेका अधिकांश कार्यले पूर्णता पाउने छन् । छरछिमेकमा नयाँ चहलपहल रहनेछ । सकारात्मक सोचको विकास हुनेछ । आर्थिक पक्ष बलियो रहला ।
कडा परिश्रम पछि मात्र लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ । नयाँ लगानिले तनाब मात्र थपिनेछ । दैनिकीमा नै व्यस्थ रहनुहोला । सहयोगीहरुले साथ छाड्न सक्छन्, सजक रहनु होला । सोचे अनुरुप कार्य बन्ने छैन ।
पति–पत्नी विचको सम्बन्ध सुमधुर बन्ने समय रहेको छ । प्रेम प्रसंगले मूर्तरुप लिनेछ । मान्यजनको सहयोग उचित रुपमा मिल्नेछ । मनोरञ्जनात्मक समारोहमा सहभागी भइनेछ । आकर्षण शक्ति बढेर जानेछ ।
आर्थिक पक्ष सबल रहनेछ । व्यवसायमा नयाँ लगानि गर्दा पछिसम्म लाभ लिन पाइनेछ । शत्रू पक्ष कमजोर रहँदा कार्य गर्ने वातावरण बन्नेछ । पूराना उठ्न बाँकी रकमलाई पहल गर्दा उठाउन सकिनेछ ।
पढाइलेखाइमा मन जानेछ । पारिवारिक समस्या हल भएर जानेछ । सन्तानको सहयोगले महत्वपूर्ण कार्य बन्नेछ । रमाइलो यात्राको संभावना प्रवल देखिन्छ । मानसिक क्षमतामा बृद्धि विकास हुनेछ ।
स्वास्थ्य अवस्था कमजोर नै रहनेछ । नजिकका व्यक्तिसँग नै विवाद बढ्नेछ । श्रमको सही मूल्यांकन नमिल्दा कार्य गर्न मन लाग्ने छैन । गोपनीयता बाहिरीँदा समस्या सृजना हुन सक्छ, सजक रहनु होला ।
हर्षको खबर सुन्न पाइनेछ । वैदेशिक क्षेत्रका अपूरा कार्य बन्ने छन् । साथीसंगीसँगको सम्बन्धमा सुधार हुनेछ । कृषि एवं पशुपालमा लाग्नेहरुका लागि लाभकारी समय रहेको छ । अध्ययनमा रुचि बढ्नेछ ।
पूर्व तयारीका साथ कार्यमा लाग्दा विशेष सफलता मिल्नेछ । दिगो फाइदा हुने खाले कार्यको आरम्भ हुनेछ । विपक्षीहरु पनि मेलमिलापमा आउन बाध्य हुने छन् । खुसी बढ्नेछ । सानो कार्यमा भुल्ने समय छैन ।
आत्मकारक ग्रहको पूर्ण रुपमा बल मिलेको छ । मानसम्मान मिल्नेछ भने सामाजिक कार्यबाट जस समेत पाइनेछ । थालेका कार्यबाट छोटो समयमा नै लाभ लिन सकिनेछ । लामो समय पछि मित्र मिलन हुनेछ ।
हतारमा गरेको निर्णयले पछुताउनु पर्नेछ । तपाईँको बालिको गलत अर्थ लाग्न सक्छ, बोलिमा संयम रहनुहोला । मनमा शंका उपशंका उब्जनेछ । शैक्षिक उपलब्धिमा ह्रास आउनेछ । जिद्दिपनले कार्य विग्रनेछ ।
व्यवसायमा नयाँ संझौता हुनेछ । मिहिनेतको उचित कदर हुनेछ । सामाजिक पद प्रतिष्ठा मिल्नेछ । नाम, दाम मिल्ने समय रहेको छ । आय मूलक कार्यमा ध्यान जानेछ । सही समयको उचित लाभ लिनुहोला ।
वि.सं. २०७७ साल असोज ११ गते आइतबार, तदनुसार ई.सं. २०२० सेप्टेम्बर २७ तारिख, प्रमादीनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, शरदऋतु, चान्द्रमान अनुसार अधिक आश्विनशुक्लपक्षको एकादशी तिथि वेलुका ९ः२९ बजेसम्म, त्यसपछि द्वादशी तिथि रहनेछ ।
नक्षत्र श्रवण वेलुका ११ः३१ बजेसम्म, त्यसपछि धनिष्ठा रहनेछ ।
विष्कुंभादी योग सुकर्मा रात्रि १०ः५९ बजेसम्म, त्यसपछि धृती रहनेछ ।
आनन्दादी योग गद ।
करण वणिक् पूर्वान्ह ९ः३३ बजेसम्म, त्यसपछि बव रहनेछ ।
श्रीसूर्य कन्या राशिमा, चन्द्रमा : मकर राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ ।
सूर्योदय ५ः५५ बजे, सूर्यास्त : बेलुका ५ः५३ बजे ।